के तपाइँ जर्मनी मा Neuschwanstein कैसल भ्रमण गर्न जान्नुपर्दछ यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | अल्बानिया, यात्रा
संसारको सब भन्दा राम्रो महल मध्ये एक Neuschwanstein महल हो। यो क्लासिक परिक कथा महल हो र जब तपाईं यसलाई फोटोमा देख्नुहुन्छ जस्तो देखिन्छ कि तपाईं यसमा आउँदै हुनुहुन्छ र भित्र हराउनुहुन्छ। यो भित्र छ बावरिया, जर्मनीर रिचार्ड वाग्नरलाई एक श्रद्धांजलि हो, महान शास्त्रीय संगीत रचनाकार।
यो मध्ययुगीन महल होइन तर हो महलको रोमान्टिक मनोरन्जन, वाग्नरको ओपेराहरूमा आधारित एक वास्तुशिल्प प्रेरणा। केवल यो डाटालाई थाहा पाएर मात्र के थाहा छ कसैले यसलाई हेरे जुन यो नजिक हुँदै आएको छ: यात्रा गर्न, महल, कल्पना गर्न, सपना देखी महल। सम्भव नभएको महसुस गर्न जर्मनी जानुभएको जस्तो लाग्दैन त्यसैले म तपाईंलाई छोडछु व्यावहारिक जानकारी उसलाई भेट्न.
1 Neuschwanstein महल
2 कसरी Neuschwanstein महल जान
3 Neuschwanstein Castle भ्रमण गर्नुहोस्
यो बभेरियाका राजा लुडविग द्वितीयको आदेशमा निर्माण गरिएको हो, रिचार्ड वाग्नरको महान प्रशंसक। भाग श्रद्धांजलि, भाग शाही शरण, कम्तिमा सिद्धान्तमा, यसको निर्माण अत्यन्त महँगो थियो र यसले सार्वभौमको सार्वजनिक कोष र व्यक्तिगत भाग्यको राम्रो हिस्सा लिएको थियो।
यो Schwangau को नगरपालिका मा छ, दिव्य अल्पाइन पहाडहरूको क्षेत्रमा। लुडविगका बुबाको यस क्षेत्रमा पहिले नै महल थियो, होप्सन्चवाau्ग कासल, त्यसैले जब उनी बच्चा थिए भविष्यका राजाले आफ्नो ग्रीष्मकाल यहाँ बिताए र त्यहाँका मध्यकालीन दुई किल्लाहरूको भग्नावशेषमा घुम्न थाले जुन उनले वर्षौंपछि आफ्नो सपनाको निर्माण गर्ने थिए। सन्‌ १ 1864 he मा उनले सिंहासन ग्रहण गर्ने बित्तिकै उनले आफ्नो योजना, ढु stone्गाको ढु began्गामा शुरू गरे।
उनले यसलाई बप्तिस्मा लिए न्यू होहेन्स्वाang्गः, आफ्नो बचपन को महल को सम्मान मा। त्यसबेला रोमान्टिकवाद चल्दै थियो त्यसैले मध्य युगको दर्शन गुलाबी रंगमा मिल्दोजुल्दो छ र यो नायिका र राजाहरूसँग मिल्दोजुल्दो दृश्य जस्तो देखिन्थ्यो, शताब्दीको गरीबी, फोहोर र युद्धहरू भन्दा यो वास्तवमै थियो। त्यो रोमान्टिक विचार लुडविगको महल, स्टाइलहरूको मिश्रणको जन्म भएको हो। १ th औं शताब्दीको विशिष्ट रोमानेस्क, गोथिक र बाइजान्टिन विवरणहरू र आधुनिक विवरणहरू र सेवाहरू छन्.
र साथै, रिचर्ड वाग्नरको काममा स्पष्ट प्रेरणाको साथ, ओपेरा Parsifal, Lohengrin र Tannhäuser। १ 1882२ सम्ममा कामहरू सकियो र किल्ला पूर्ण रूपमा समाप्त भयो र सुसज्जित भयो। ती दशकहरूको बखत, यो क्षेत्रमा कामको मुख्य स्रोत थियो र कामदारहरूले मासिक भुक्तानी पनि पाउँथे र ती मध्ये एकको मृत्यु हुँदा उनीहरूको परिवारले निवृत्तिभरण पाउँछन्।
न्युश्वान्स्टाइन महल दरबारको बिना राजाको शरणस्थल भयो। विडम्बना त्यो हो लुडविग त्यहाँ बस १ 172२ दिन बसे र त्यो १ag 1893 in मा उनको मृत्यु भएपछि वागनरले त्यसमाथि पनि कदम चाल्न सकेनन्।
कसरी Neuschwanstein महल जान
तपाईं रेल वा कार द्वारा त्यहाँ पुग्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं रेलमा जानुहुन्छ भने उत्तम विकल्प म्युनिकबाट फेसनको गाउँसम्म पुग्नु हो। यात्रा साढे दुई घण्टा हो र सवारी राम्रा परिदृश्यले भरिएको छ। एकपटक फसेनमा तपाईं बस,,,, फेवरहेरहोस, वा 73 78 टेगलबर्गह्न, श्वांगाउको लिनुहुन्छ। स्टेशन होहेन्स्वाang्गउ हो। म्यूनिखबाट राउन्ड ट्रिपको लागतe58 यूरो छ, बस पनि समावेश छ।
तपाईं सक्नुहुन्छ बभेरिया टिकट खरीद गरेर बचत गर्नुहोस्: तपाईलाई बभेरिया, स्थानीय यातायात, बस र ट्रामहरू मार्फत असीमित यात्राको एक दिन अनुमति दिन्छ। टिकटको लागत २eयूरो छ र यो ठूलो छ जब तपाईं समूहमा यात्रा गर्नुहुन्छ किनभने यदि एक मात्र टिकट छ भने, बाँकी यातायातमा छुटको आनन्द लिन्छन्। १ 23 बर्ष भन्दा कम उमेरका बच्चाहरू नि: शुल्कको लागि यात्रा गर्छन् यदि उनीहरू तिनीहरूको वयस्क आफन्तहरू, आमाबाबु वा हजुरबा हजुरआमासँग यात्रा गर्छन्।
तपाईं A7 मोटरवेमा F Ulssen को लागि पनि सीधा ड्राइभ गर्न सक्नुहुनेछ दिशा Ulm-Kempten-Füssen मा। त्यहाँबाट तपाईं B17 मा जारी रहनुहुन्छ Schanwagau सधैं जहिले होहेन्स्वाw्गउ तिर जान। यदि तपाईं महलमा कारबाट आइपुग्नु भयो भने तपाईंले पार्कि forको लागि शुल्क तिर्नुपर्नेछ तर तपाईं जहिले पनि सडकमा, जंगलको छेउमा, गाउँ वरिपरिको क्षेत्रमा पार्क गर्न सक्नुहुनेछ। र अब हो, तपाईं जानुहुन्छ र महलहरू भेट्नु पर्छ (त्यहाँ न्युश्चवान्स्टेन छ र लुडविगका बुबाले बनाउनुभएको हो, होहेन्स्वाang्गउ भनिने एक भव्य टेराकोटा महल)।
शहर बाट सस्तो विकल्प पैदल छ। मलाई यो धेरै मनपर्‍यो किनभने तपाईंलाई यो ठाउँ पनि थाहा छ र अन्य विचारहरू पनि छन्। केही हिसाब गर्नुहोस् Minute० मिनेट हिंडाई माथि त्यसैले यो सबैका लागि मार्ग छैन। यदि तपाईं जवान हुनुहुन्छ, तपाईं पक्कै पहिले आउनुहुनेछ। पथहरू प्रशस्त छन् र केहि सेक्टरहरूमा वन पार। त्यहाँ संकेतहरू छन् जुन ठाउँको ईतिहासको अंश स indicate्केत गर्दछ ताकि तपाईं बिस्तारै मौसममा प्रवेश गर्नुहोस्।
एक घमाइलो दिन साँच्चै एक सुन्दर वृद्धि हो। यदि तपाईंलाई हिंडाइ जस्तो लाग्दैन वा तपाईं सक्नुहुन्न पहाडमा जाने एउटा बस छ। यसको लागत € १. .० छ र यदि हिउँ वा बरफ सडकमा छ भने यसले काम गर्दैन।
Neuschwanstein Castle भ्रमण गर्नुहोस्
त्यहाँ छ महलमा पुग्नु भन्दा पहिले प्रवेश टिकट किन्नुहोस्। तपाईं यसलाई होमेन्स्वाang्गउ वा अनलाईनमा बक्स अफिसमा खरीद गर्न सक्नुहुनेछ, यद्यपि उनीहरूले अलि बढी चार्ज गरे। शहरमा टिकट कार्यालय Apseestrasse, १२, D-12 87645 at मा छ। टिकटमा यात्रा सुरु हुने समय समावेश छ त्यसैले तपाईं ढिला हुन सक्नुहुन्न। सबै कुरा धेरै संगठित छ। यदि तपाईंले यो याद गर्नुभयो भने, तपाईंले फेरि तिर्नुपर्नेछ। मूल्य हो महलको लागि १२ यूरो र दुई किल्लाहरूमा भ्रमणका लागि २eयूरो। १ 18 बर्ष भन्दा कम उमेरका बच्चाहरू स्वतन्त्र हुन्छन् यदि उनीहरू वयस्कसँगै छन्।
तपाईं महल प्रवेश गर्न सक्नुहुन्न यदि यो निर्देशित भ्रमणको साथ हो भने, त्यसैले यदि तपाईं टिकट भुक्तान गर्ने भित्री जान्नमा चासो राख्नुहुन्न भने यो लायक छैन। तपाईं दुबै महल बाहिर घुम्न सक्नुहुन्छ। साथै, ती भित्र उनीहरूले तपाईंलाई फोटो खिच्न दिदैनन्। अन्तमा, यो यो संसारमा अवलोकन गरिएको महलहरू मध्ये एक हो त्यसैले तपाईंको भ्रमणमा धेरै व्यक्तिको अपेक्षा राख्नुहोस्। विशेष गरी उच्च मौसममा। यदि तपाईं भीडबाट बच्न चाहानुहुन्छ भने हिउँदमा जानु उत्तम हुन्छ। यो चिसो छ तर ल्याण्डस्केपहरू जति सुन्दर छन्। हो, महल अपरान्ह 3० बन्द हुन्छ।
उच्च मौसममा तिनीहरू केवल बेचिन्छन् Day हजार टिकट प्रति दिन त्यसैले यदि तपाइँ गर्मीमा जानुहुन्छ भने यसलाई छिट्टै किन्ने प्रयास गर्नुहोस्। बक्स अफिस am देखि साँझ from सम्म खुल्ला छ। गर्मी मा महलको घण्टा बिहान 8 देखि साँझ5सम्म चल्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » Getaways यूरोप » अल्बानिया » के तपाइँ जर्मनी मा Neuschwanstein कैसल भ्रमण गर्न जान्नुपर्दछ
इस्तानबुलमा हेर्नका लागि आवश्यक चीजहरू